Izindlela ezi-4 zokukhulisa ukubandakanyeka kwamakhasimende |I-Camei Ele&Stationery
Okwenziwa yikhasimende lokuqala kufana nedethi yokuqala.Ubenze banentshisekelo ngokwanele ukuthi bathi yebo.Kodwa umsebenzi wakho awenziwa.Uzodinga ukwenza okwengeziwe ukuze ubagcine bethembisene umshado - futhi uyavumelana nezinsuku ezengeziwe!Ukuze uthole ulwazi lwekhasimende, nazi izindlela ezine zokuthuthukisa ukusebenzelana.
Amakhasimende amatasatasa, ayaphazamiseka futhi agcwele izinhlinzeko ezivela ezimbangi zakho.Ngakho udinga amaqhinga ukuze uwagcine egxile futhi esebenzisana nawe.Lawa macebiso enza ochwepheshe bakwa-American Express bazosiza.
Kungakhathaliseki ukuthi usebenza esimweni se-B2B noma se-B2C, amakhasimende akho cishe afuna ukwazi okwengeziwe ngomkhakha noma izimo ezibalethe ukuthi zithenge kuwe.
Ngenhlanhla, ungabanikeza ukuthuthukiswa kochwepheshe kanye/noma komuntu siqu ngezindlela nezikhathi ezahlukahlukene ukuze cishe njalo bathole okuthile okuzofanela izimpilo zabo ezimatasa.Ithimba lakho lokumaketha kanye/noma lokuhlangenwe nakho kwamakhasimende kungenzeka linezinsiza zemfundo esezivele zikhona ezingapakishwa ngezinye izindlela ukuze kuhlangatshezwane nokufunda lapho usohambeni.
Yakha izifundo eziku-inthanethi namaphodikasti.Dala umtapo wezincwadi wezifundo, kanye namaphepha amathiphu alandekayo noma amaphepha amhlophe.Nyusa “ingosi yezemfundo” eziteshini zakho zenkundla yezokuxhumana.Thumela imilayezo ye-imeyili, umeme amakhasimende ukuthi ayifinyelele.Baklomelise (mhlawumbe ngesaphulelo) ngokusebenzisa izifundo.
Abantu abasebudlelwaneni obusha bavame ukubamba iqhaza “ekubuyiseleni okumangazayo,” benikeza izipho ezingalindelekile noma umusa ukukhombisa ukuthi ngamunye umkhathalela kangakanani omunye nokugcina ubudlelwano buqhubekela phambili ngendlela enhle.
Okufanayo kungahambela amabhizinisi nezingcweti zolwazi lwekhasimende ezizama ukugcina umlilo uvutha namakhasimende amasha.
Dala ukuzizwisa "okuvelayo" - imicimbi emifushane, ejabulisayo endaweni ebonakalayo noma ku-inthanethi.Memezela umcimbi eziteshini zakho zenkundla yezokuxhumana.Izinto ongazizama: ukuthengiswa kwe-flash okukhethekile kubathengi bakamuva, ukufinyelela kochwepheshe kulo mkhakha amakhasimende akho anentshisekelo kuwo, imicimbi yokuzijabulisa efana nobuciko bendawo noma ezemidlalo, noma ukufinyelela encwadini entsha, efanelekile.
Esikhathini lapho ukuxhumana okuningi kwenziwa ngamakhompuyutha nezinhlelo zokusebenza (hhayi empeleni ngezwi ocingweni), ukulandela komuntu siqu kuzobandakanya amakhasimende ngaphezu kombhalo noma i-imeyili engake yenze.
Isevisi yekhasimende kanye nochwepheshe bokuthengisa bangase bashayele - ngisho noma iya kuvoyisimeyili - ngemva kokuthenga okokuqala futhi babelane ithiphu yokwenza okuhle ngomkhiqizo noma isevisi, ngokunokwenzeka bababhekise kuwebhusayithi yakho ukuze bathole amathiphu.
Yenza kube ngokwakho okwengeziwe
Njengezinhlamvu zothando kubudlelwano bothando obusafufusa, enye yezindlela ezinhle kakhulu zokubandakanya amakhasimende kubudlelwano bakho bomsebenzi ukuxhumana okuqondene nawe.
Ngokufanelekile, wenza yonke imilayezo ibe ngeyakho.Kodwa kungenzeka ukuthi unokuningi kakhulu ongakuthumela nokuphendula ukuze wenze kube ngokwakho ngaso sonke isikhathi.Futhi, amakhasimende awalindeli impendulo yomuntu siqu embuzweni oyisisekelo.
Kodwa qaphela ukuthi wonke amakhasimende amasha awayidingi yonke imilayezo oyithumelayo.Hlukanisa amakhasimende ngezigaba ngokusekelwe kulokho akuthengile, izintandokazi zabo kanye nezibalo zabantu ukuze uqiniseke ukuthi ubathumelela imilayezo, iminikelo kanye nokubonga okulingana ncamashi.
Okungcono nakakhulu, sebenzisa isistimu yakho ye-CRM ukuze ulandelele lokho abakuthandayo futhi ufinyelele kubo lapho lezo zinto zithengiswa noma okunye okufanayo kutholakala.
Isikhathi sokuthumela: May-26-2022